Orinasa mpanamboatra China Villa Design | Zhenyuan
Villa:io no fanitarana mety indrindra amin'ny trano onenana, izy no mpisolo anarana ny rendrarendra, avo lenta, manokana sy harena. Izy io dia fonenana an-jaridaina naorina amin'ny faritra ambanivohitra na toerana mahafinaritra hanaovana fialam-boly.
Fantatra amin'ny ankapobeny fa, ankoatry ny fiasa fototra amin'ny "fiainana", dia trano onenan'antitra izay maneho indrindra ny kalitaon'ny fiainana sy ny toetra mahafinaritra. Amin'ny lafiny maoderina dia trano fonenana tsy miankina amin'ny zaridaina izy io, izay miorina amin'ny trano tsy miankina.
Nozaraina amin'ireto karazana dimy ireto ny villa: villa tokana, trano tanana, villa roa sosona, villa ambonimbony, villa misy habakabaka.
* Villa misy fianakaviana tokana
Izany hoe, tokontany tokana misy toerana tsy miankina eo an-tampon'ny zaridaina sy zaridaina tsy miankina amin'ny farany ambany dia trano tsy miankina iray, izay aseho ho toerana tsy miankina manodidina ny sisiny ambony sy ambany. Amin'ny ankapobeny, misy toerana maitso sy tokotany misy faritra samihafa manodidina ny trano. Ity karazana villa ity dia iray amin'ny fiainana an-trano tranainy indrindra, matanjaka, vidin'ny tsena ambony, no endrika farany amin'ny maritrano villa ihany koa.
* Villa roa sosona
Izy io dia vokatra afovoany eo anelanelan'ny trano misy tanàna sy ilay villa mitokana, izay misy singa roa ao an-tanàna. Ny trano 2-PAC malaza kokoa any Etazonia dia karazana trano roa-parety. Fampihenana ny hakitroky ny fiarahamonina sy Ny fampitomboana ny tampon'ny jiro ao an-trano dia mahatonga azy io hanana toerana malalaka kokoa any ivelany. manazava ny andro ary mahita.
* Trano tanàna
Izy io dia manana ny tokotaniny sy ny garazy misy azy, misy singa telo na maromaro, ampifandraisina amin'ny andalana roa ka hatramin'ny efatra, ny trano tsirairay dia mizara rindrina ivelany, miaraka amina endrika sary mirindra ary vavahady iray hafa. fa ny ankamaroan'ny villa ara-toekarena dia mandray.
* Vohitra miforitra
Izy io dia fanitarana ny trano misy tanàna, eo anelanelan'ny villa sy ny trano, dia misy trano duplex misy gorodona marobe izay apetraka ambony ka hatrany ambany. Amin'ny ankapobeny dia efitrano efatra ka hatramin'ny fito, isaky ny rihana misy rihana roa ka hatramin'ny telo an'ny villa hatrany ambony ka hatrany ambany, raha ampitahaina amin'ny trano misy tanàna, ny maodely tsy miankina amin'ny tany dia afaka manankarena, ary amin'ny lafiny iray handresena ny lesoka an-tranon'ny tanàna tery sy lalina.
* Villa any an-danitra
Avy any Etazonia ny villa Sky, nantsoina hoe "penthouse" na "sky attic" tamin'ny voalohany dia manondro trano lafo vidy izay eo afovoan-tanàna, tampon'ny tampon'ny havoana. namboarina teo ambonin'ny trano na trano avo be miendrika villa. Ireo vokatra takiana dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny tontolon'ny villa, miaraka amin'ny toerana ara-jeografika tsara, fahitana malalaka, mangarahara sns.
Avy amin'ny endrika maritrano, ny endrik'ilay villa dia efa nandika ny fetra isam-paritra sy ny firenena, ny endrika maritrano villa miavaka manerantany ao amin'ny tsenan'ny villa ao Shina dia saika hita taratra.
Fanomezana ny villa
Ny haavon'ny villa eo aloha
Ny haavon'ny villa
Previous: Miorina firafitry ny membrane
Manaraka: Sokajy famokarana indostrialy
Famoronana Villa tsy miankina
Famolavolana firafitra vy vy
Famolavolana sary firafitra vy vy